[APK] Havaozina ny sarintany miaraka amin'ny fisintonana sarintany tsy mandeha ho azy | Androidsis
[APK] Google Maps dia nohavaozina miaraka amin'ny fisintomana mandeha ho azy ny sari-tany tsy miankina sy maro hafa
Rehefa avy nahalala ireo kisary Google Play vaovao izay manasongadina ny fahatsapana azo tamin'ny Android 6.0 Marshmallow ho an'ny OS mitohy sy matotra kokoa, Google dia hanavao ny fampiharana ny sarintany miaraka amin'ny antsipiriany sasany haneho hevitra satria fisintomana mandeha ho azy ny sari-tany tsy misy tambajotra. Ity dia iray amin'ireo fiasa izay natolotro ny fitiavako kely indrindra nandritra ny fotoana ela, fa hatramin'ny nisehoan'i HERE tao amin'ny Google Play Store dia toa niova ny zava-drehetra.
Ankoatran'ity zava-baovao amin'ny fisintomana sarintany ivelan'ny toerana ity, a fampandrenesana nohatsaraina ho an'ny fitetezana, fampandrenesana amin'ny fisehoan-javatra amin'ny fizotry ny fotoana sy antsipiriany kely hanampiana sary iray amin'ireo hevitra heverinay avy amin'ny fampiharana. Andiana pitsopitsony kely manaraka ny gadona fanavaozana ny Google Maps izay tsy misy vaovao tsara, fa mihatsara tsikelikely ny fampiharana.
Ny maody fitetezana dia manana fampandrenesana maharitra izay nohavaozina kely ka miavaka kokoa amin'ny soratra fotsy eo ambadika maintso. Ny iray amin'ireo safidy nohatsaraina dia ireo fampandrenesana izay haseho kely aorian'ny fijanonanao amin'ny toerana iray, noho izany dia nohavaozina ny fahita matetika aseho azy ireo.
Ny zava-baovao lehibe indrindra dia ny fisintomana ho azy ireo sarintany ivelan'ny toerana. Hikarakara ny fampiharana ho "manan-tsaina" bebe kokoa ny fantaro ireo faritra anaovanao ireo sarintany mandeha ho azy fa tsy mila very fitetezam-paritra amin'ny fifandraisana ratsy na tambajotra tsentsina.
Mba hamaranana, manana antsipiriany kely izahay ao amin'ny menio safidy avy amin'ny safidy famerenana, izay iray nampiana izay mamela ny fampidirana sary ho an'io rafitra misy antsika io.
Sintomy ny sarintany APK 9.23.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » [APK] Google Maps dia nohavaozina miaraka amin'ny fisintomana mandeha ho azy ny sari-tany tsy miankina sy maro hafa
Tonga amin'ny firenena 18 vaovao ny Android Auto, ao Brezila, India ary Russia